Vaovao - Tsy azo atosika ny motera hovitrovitra
Vita ny motera hovitrovitra
Vita amin'ny rivotra mahery vaika
Ny fizotry ny fizahana manontolo an'ny motera mihetsiketsika dia ny manala sary sy manome naoty ireo fitaovana. Ny fitaovan'ny miavaka manokana dia mizara ho fitaovana ambony sy ambany. Ny fahombiazan'ny fizahana dia tokony ho avo, ny fahaiza-manao fanodinana dia tokony mahafeno ny fepetra takiana, ary ny fitaovana azo entina koa. Misy antony maro samihafa amin'ny fisavana ireo fitaovana amin'ny alàlan'ny efijery mihetsiketsika, mba tsy hihoaran'ny fitaovana kely kokoa noho ny harato ny lavaka sieve amin'ny efijery mihetsiketsika. Ny ampahany kely amin'ny fitaovana tsara dia tsara ihany no azo esorina amin'ny lavaka sivana, fa ny fitaovana hafa kely noho ny lavaka siève kosa dia afangaro amin'ireo fitaovana lehibe kokoa noho ilay lavaka sivana (izany hoe ny fitaovana eo amin'ny efijery).
Ho an'ny fitaovana fitiliana motera mihetsiketsika, ny faritra fitiliana mahomby, ny firafitry ny efijery, ny firafitry ny efijery mihetsiketsika, ny faharetan'ny fihovotrovotra ary ny amplitude dia ireo antony lehibe koa misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny écran ny écran vibrant; noho ny haben'ny fitaovana, ny hamandoana (atiny hamandoana), ny fizarana kojakoja granular sy ny fluidity ara-materialy, izy io ihany koa no antony lehibe indrindra misy fiatraikany mivantana amin'ny taham-pizahana ny efijery mihetsiketsika. Ireo fitaovana misy fluidity havanana tsara, atiny rano kely, endrika poti-javatra mahazatra, moron-damosina ary tsy misy sisiny sy zorony dia mora mandalo amin'ny efijery.
Mba hanatsarana ny fahombiazan'ny fitiliana ny motera mihetsiketsika, ho an'ireo fitaovana sy fitaovana tsara izay sarotra zahana, ny efijery mihetsiketsika boribory dia afaka manitsy ny làlan'ny fihodinan'ny vibrator (manodina ny fihodinan'ny fivezivezena) hanitatra ny fotoana ifandraisan'ny ny velaran'ny efijery sy ny fitaovana, izay mahatonga ny tahan'ny fisavana, fa ny fahaiza-manao kosa dia hahena; ny efijery mihetsiketsika mitanjozotra dia afaka mampihena tsara ny zoro mitongilana midina amin'ny tampon'ny efijery mihetsiketsika na mampitombo azy io dia ampiasaina amin'ny fampihenana ny hafainganam-pandehan'ny fitaovana sy ny fanatsarana ny tahan'ny fitiliana; ho an'ny fitaovana mora zahana sy sombin-javatra lehibe, ny zoro mitongilana mankany ambany amin'ny efijery misy ny efijery mihetsiketsika dia azo ahena na ny zoro firongatry ny hovitrovitra dia azo ahena mba hanafainganana ny fizotran'ireo fitaovana, mba hanatsarana ny fanodinana fahafahana. Raha toa ka avo kokoa ny vokatra azo avy amin'ny efijery mihetsiketsika mivantana, ary tokony hihaona ny fahombiazan'ny fitiliana sy ny fahaiza-mitantana, dia azo ampitomboina ny sakany sy ny halavan'ny velaran'ny efijery.
Fotoana fandefasana: Aug-31-2020